ဆီးချိုရောဂါရှိသူတစ်ယောက် ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်သလဲ…
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူက ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုရောဂါက သွေးတိုးရောဂါနဲ့တွဲနေရင်၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အဆီများတာနဲ့တွဲနေရင်၊ လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. အခုနောက်ပိုင်း ဆီးချိုသမားတွေ စားသင့်တယ်ဆိုပြီး ၀ဥကြာဆန်၊ ၀ဥခေါက်ဆွဲတွေ ခေတ်စားလာပါတယ်။ အဲဒါတွေက တကယ်ပဲ ဆီးချိုသမားတွေ စားသင့်တာပါလား။ ဆိုးကျိုးတွေကော ရှိပါသလား ဆရာမ။ A. ၀ဥကြာဆန်၊...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက် နှစ်လကျော် ရက်လွန်အစားအစာတွေ (ဥပမာ-ဘီစကွတ်၊ ကော်ဖီမစ်၊ အသင့်စားသုံးဖို့ပြုတ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲ) အစရှိတာတွေကို စားသုံးမိရင် ဘာရောဂါဝေဒနာ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။ ကင်ဆာရောဂါရရှိမှာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ A. အစားအသောက်ကနေ...
Vitamin B2 သောက်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. Vitamin B2 သောက်ပါက မည်သည့်ကျန်းမာရေးကို မည်သို့အကျိုးရှိသည်ကို သိလိုပါသည်။ A. ဗီတာမင် B2 အကြောင်း မပြောခင် ဗီတာမင်ဓာတ်တွေအကြောင်းကို အရင်ပြောချင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဆိုတာ သြဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က...
—၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ထိပ်ကပ်နာက ဘာလို့ဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ။ A. ထိပ်ကပ်နာဆိုတာက ဆေးပညာအရ Sinusitis ကို ခေါ်တာပါ။ လေအိတ်ရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့...